Abalwazi Iron Ke Rebar Abasebenzi Job Inkcazelo / Iinxaxheba noxanduva Sample – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Abalwazi Iron Ke Rebar Abasebenzi Job Inkcazelo / Iinxaxheba noxanduva Sample
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga Shiya amazwana 663 Views
Imeko kunye pubs aluminiyamu ezikhuselweyo okanye efanelekileyo iifom izinto eziphathekayo ukuze kuphuculwe isamente. Sebenza kunye nenani izinto zokubopha, pole- izixhobo usonge, blowtorches . Iqulathe Busters intonga.
zokudla izinto Secure kunye nendawo, rod, efanelekileyo iintlobo ukuba isamente, okanye iingcingo, sisebenzisa izinto zokubopha, intonga- handtools okanye iimatshini ukugoba.
Yanxitywa nendlu kunye iintonga-iifomu ngokungqinelana neplani, ga isicelo kunye neengcingo.
Nquma izixa, nobukhulu, iimilo, kunye neendawo ekomelezeni sixhasa imifanekiso, yoyilo, okanye iziphakamiso zamazinyo.
Xa nokubethelela imigangatho indawo iibhloko phantsi kwakhona bar-ukuba wawuxhoma cafes off kumgangatho.
Nciphisa zokunceda amanyathelo kulindeleke, esebenzisa izibane, hacksaws okanye zalo zokuthena.
Nciphisa uze utshatise wire-umnatha okanye ilaphu, usebenzisa isekela ebese, kunye nemeko enemingxuma okanye ilaphu ngaphakathi ngekhonkrithi sokuxhasa eziphathekayo.
Songa ebuntsimbi ixhasa nayo rodbending izixhobo okanye handtools kwaye weld ezi nokuba nezixhobo ukuwelda arc.
Ukufunda umxholo Knowledge-Knowledge wadala nezivakalisi iifayile ezinxulumene nomsebenzi.
Active-Ukuphulaphula-To ntoni abanye abantu bathi ukunikela ingqalelo yonke,, kokuba ixesha ukuqonda izinto udalwe, ukubuza imibuzo ngendlela efanelekileyo, kunokuba mesmerizing afika ephosakeleyo.
Ukudala-Ukusebenzelana eyiyo ebhaliweyo njengoko ezingamfanelanga iimfuno abaphulaphuli.
Uxoxa-Ukuthetha nabanye ukukhankanya ulwazi ngendlela efanelekileyo.
Yokalo emileyo-Isebenzisa izibalo ukulungisa iingxaki.
iindlela Uphando-nokusetyenziswa kunye nezikhokelo zonyango ukusombulula iingxaki.
Critical-UkuCinga-Ukusebenzisa sizathu kwaye babecinga ukuba ubone iitalente kunye neziphene izixazululo ababambeleyo, iziphumo okanye iindlela iingxaki.
Learning-ukusiqonda Active imiphumo info into entsha malunga zombini ekhoyo elizayo zokusombulula iingxaki kwezigqibo.
Zokufunda Iindlela-Ukusebenzisa nokukhetha ubuchule coachingORtutorial kunye unyango ezifanelekileyo imeko ukufundisa okanye xa sifunda izinto idlamkile.
Ukukhangela-MonitoringANDDetermining ukusebenza iinkampani, abanye abantu, okanye wena uqwalasele izenzo zesilungiso okanye ukuvelisa izinto.
Social Perceptiveness-Ukwazi othersI utyekelo kutheni kusabela kuba benza kunye nokuqonda.
Uququzelelo-Ukulungisa izenzo ngokunxulumene amanyathelo othersI.
Ukweyisela-olululo nabanye ukuphucula iingqondo okanye imikhwa yabo.
Mediation-Ukubonelela abanye ngokudibeneyo kwaye ufuna ukuba abuyisele mahluko.
Uqeqesho-Ukufundisa abanye nje indlela bafudukele.
Orientation-Ngokugqibeleleyo inkampani efuna iindlela ukuxhasa abantu.
Complex Problemsolving-Ukumisela nemiba enzima kunye nokuphengulula iinkcukacha ezinxulumene isicelo iimpendulo ukuvelisa kukuvandlakanya amathuba.
Iinkqubo zophando-Ukuqwalasela esizifunayo kunye nesisombululo ngumba ukudala isimbo.
Engineering Design-Technology ukuba ukunika umntu nokwenza okanye zingqinelane neemfuno izixhobo.
Izixhobo Selection-Ukumisela uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi.
Ifakela-Ukongeza izixhobo, imishini, zikagesi, okanye iinkqubo ukuhlangabezana up specs.
Coding-Ukushicilela iipakethe computer ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Umsebenzi Monitoring-bebona imiqondiso ezongezelelweyo, izibambo, okanye izikhombisi ukuba siqiniseke kukho isixhobo sisasebenza ngokukuko.
Ukusebenza kunye Control-Ukusingatha iinkqubo ze nezixhobo okanye iinkqubo.
Isondlo-Ukwenza umsebenzi wazo wesiqhelo kwizixhobo nokumisela nini na, oluhlobo luni na yokunakekela kuyimfuneko.
Zokusombulula-Ukucacisa izizathu ukulawula iingxaki isigqibo oko ulwalathiso ngayo nayiphi na kuyo.
izixhobo okanye kusetyenziswe ngokusebenzisa izixhobo ezifunekayo Balungisa-Ukulungisa.
Quality-Control Uphando-Ukwenza uphando iimviwo kweemveliso, iinkampani, okanye amacebo kugweba ukusebenza okanye kakhulu.
Isigwebo and Decision-Making-Ukuthathela ingqalelo imirhumo jikelele kunye neenzuzo leentshukumo wenkukuma ukufumana eyona ilungelene.
Uhlalutyo-Icacisa kufuneka asebenze njani inkqubo kunye nendlela uhlengahlengiso kokusingqongileyo, amashishini, kananjalo zifo nempembelelo iinzuzo.
Methods Analysis-Ukumisela amanyathelo okanye ezibonisa yokusebenza kwenkqubo kunye olufanelekileyo okanye indlela yokuziphatha kufuneka kakhulu sandise ukusebenza, ngokungqinelana neenjongo zenkqubo.
Timemanagement-Managing oneis ixesha kunye nabanye’ period.
Supervision of Financial Resources Ukwazi ukuba imali iza kusetyenziselwa ukuba kwenziwe umsebenzi, nentengiso ezi inkcitho.
Ulawulo Product Imithombo-Ukubukela nokufumana ukuya ukusetyenziswa ifanelekileyo ezimqoka, izixhobo, kunye nezinto ezifunekayo ukuze benze umsebenzi ethile.
Imisebenzi ye labasebenzi Resources-ezikhuthazayo, ekuphuhliseni, nokukhokela abantu xa besebenza, ukwahlula bantu kakuhle umsebenzi wakho.
Education Qualification Udinga ulwazi
Ngaphantsi kwe Top School Level
Diploma High School (okanye kuGedaliya okanye High-School Certificates ukulingana)
Ukuphikelela – 93.52%
umzamo – 92.97%
Authority – 92.95%
Cooperation – 90.54%
Ingxaki malunga Abanye – 88.48%
Ulungelelaniso Social – 86.23%
Stress Threshold – 90.74%
ukuthembeka – 92.99%
Ingqalelo Ubunzulu – 94.95%
ukuthembeka – 92.63%
Independence – 90.60%
Thinking kohlaziyo – 89.56%